स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब काटिएको छैन- स्वास्थ्य मन्त्रालय - Dainik Online Dainik Online
स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब काटिएको छैन- स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ११ : ३१
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस विरुद्धको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब काटेर राहत कोषमा राखिएको भन्ने हल्लाप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।
कुनै पनि तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब काटेर कोरोना राहत कोषमा नराखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तब कट्टी नगरिएको बताउनुभयो।
गत चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न तहका कर्मचारीले ३ देखि ७ दिनसम्मको तलब कट्टी गरेर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टी गर्ने निर्देशन जारी नगरेको डा. देवकोटाले बताउनुभयो।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टी गर्ने निर्देशन जारी गरेको छैन र हालसम्म कटट्टी पनि गरिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सबैले उच्च मनोवलका साथ काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ।’
यसअघि विभिन्न अनलाइन मिडियाहरुमा अरुको तलब काटिए पनि जो अहिलेको महामारीमा ज्यानको पर्वाह नगरी बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्, उनीहरुको तलब काट्न नहुने आसयका समाचारहरु आएका थिए। बरु उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्ने, अतिरिक्त समयको छुट्टै सुविधा दिनुपर्ने माग उठेको थियो।
सुन्नुहोस् मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनको भिडियो-